Indlu entle kwiSiqithi sasePucusana - I-Airbnb
Indlu entle kwiSiqithi sasePucusana
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguLorena
Indawo ekhethekileyo apho unokusebenza okanye uphumle ujonge kulwandle oluzolileyo lwePucusana Bay ngelixa umamele iintaka zolwandle kunye nezikhephe zokuloba. Indawo ekhuselekileyo nethuleyo, engenamoto kwaye ijikelezwe yindalo. Siyinxalenye yombutho okhoyo kuyo nayiphi na imibuzo. Ukuthenga kunye neendawo zokutyela ezineenkonzo zokuhanjiswa. Ilungele ukuqhawula unxibelelwano nosapho, iqabane okanye abahlobo, kunye nokubona izilwanyana zaselwandle, ukwenza imidlalo yasemanzini, ukuntywila, ukusebenza ngoxolo kwaye ujabulele ukutya kwasePeruvia.
Yindawo enesilingi eziphakamileyo kakhulu kunye nokukhanya okuninzi ngenxa yeefestile ezinkulu kunye neefestile eziyilelwe ukuba zibe nokukhanya kwendalo kuyo yonke indlu kwaye ubone ulwandle naphi na endlwini. I-terrace ibonakala idada esibhakabhakeni kwaye inemibono engakholelekiyo yolwandle, iintaba zonxweme ezinamawa kwelinye icala kunye nolwandle oluphezulu kwelinye. Zonke iindawo ziyilelwe ukungena komoya ngokwendalo kwaye amagumbi okulala anezivalo zobumfihlo. Igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela kunye nepatio ziqhagamshelwe ukwenza inxalenye yendawo enkulu yentlalo eyahlulwe kumagumbi. Indlu yokuhlambela inkulu, inomoya kwaye inesilingi eziphezulu. Igumbi eliphindwe kabini line-terrace enkulu kunye nemibono yolwandle. Igumbi lokulala lesibini linebhedi eyibhedi eyi-3 enesilingi eziphezulu kunye newodrophu yamaplanga. Indlu yonke yindawo ekhuthazayo kakhulu.
Sisiqithi esinezindlu ezimbalwa kunye nezilwanyana zaselwandle ezininzi ezinjengeentaka zolwandle, iingonyama zolwandle, iiotter zaselwandle, njl. Imi phambi kwePucusana, ilali yokuloba yemveli, kunye nespa saseNaplo. Inombono omhle weBay of Pucusana kwaye ulwandle luzolile kakhulu kuba lujonge kwi-bay kwaye amaza akafiki ngokuthe ngqo. Yindawo ezolileyo kunye nendalo. Sinombutho wabanini abanendawo apho kukho iinkundla zamatyala, indawo yokuqubha (ehlotyeni) kunye nomlawuli onokubacebisa. Ungathatha uhambo ngesikhephe ukuya kwindawo engasemva kwesiqithi apho iingonyama zolwandle, amawa, imiqolomba kunye neentaka zolwandle zininzi.